E-News Nepali || Fast and Accuracy » बन्द भयो विन्डोज-७, बैंकिङ कारोबार र इमेल नगर्न चे’तावनी
बन्द भयो विन्डोज-७, बैंकिङ कारोबार र इमेल नगर्न चे’तावनी
एजेन्सी / विन्डोज-७ अपरेटिङ सिस्टम मंगलबारदेखि बन्द भएको छ। माइक्रोसफ्टले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई जतिसक्दो चाँडो सिस्टम अपग्रेड गर्न आह्वान पनि गरेको छ । नयाँ प्रविधिमा ‘फोकस’ हुने भन्दै कम्पनीले विन्डोज-७ बन्द गरेको हो। करिब दुई वर्षअघि नै कम्पनीले यसबारे जानकारी भने दिएको थियो।
विन्डोज-७ बन्द भएसँगै प्रयोगकर्ताले कुनै पनि महत्वपूर्ण सेक्युरिटी अपडेट र उपकरण सुरक्षित राख्ने अन्य सुविधाहरू पाउने छैनन् । अहिले पनि विन्डोज प्रयोगकर्ताका एक चौथाइले विन्डोज-७ नै प्रयोग गरिरहेको स्टाटकाउन्टरको तथ्यांक छ।
माइक्रोसफ्ट लामो समयदेखि विन्डोज-७ मा ह्या’करहरूको आ’क्रमणबाट पीडित थियो। विभिन्न भा’इरसका कारण प्रयोगकर्ता समस्या परिरहेका थिए। अब विन्डोज-७ मा कुनै समस्या आए माइक्रोसफ्टले स’माधान गर्ने छैन। अपडेट र सुरक्षा सुविधा नभएपछि विन्डोज-७ मा चल्ने उपकरणहरूमा भा’इरसको समस्या झन् धेरै हुन्छ’ माइक्रोसफ्टको वेबसाइटमा लेखिएको छ। क्यास्पर्स्की ल्याबका वरिष्ठ सुरक्षा अध्येता डेभिड इमले पनि जतिसक्दो चाँडो प्रयोगकर्ताले नयाँ विन्डोज राख्नुपर्ने सुझाएका छन्।
नभए कम्प्युटरहरूमा भा’इरस र अन्य समस्याले आ’क्रमण गर्नेछ र पूरै बिग्रिन पनि सक्छ। त्यस्तै ह्या’क भएमा कम्प्युटरमा भएका सबै डेटा र विवरण पनि चो’रिन सक्छ।मंगलबारबाट विन्डोज-७ बन्द भए पनि कम्प्युटर चलिनैहाल्छ। तर यसमा जोखिम धेरै हुनेछ। त्यसैले माइक्रोसफ्टले विन्डोज-१० अपग्रेड गर्न भनेको छ।
यो खबरसँगै बेलायती अधिकारीहरूले इन्टरनेट बैंकिङ कारोबार वा इमेल गर्न विन्डोज-७ नचलाउन चे’तावनी पनि दिएको छ।
प्रकाशित मिति १ माघ २०७६, बुधबार १०:१७
ट्राफिक महिला प्रहरीले एक अपाङ्गलाइ बाटो कटाइदिदै सेलुट गर्दै १ लाईक गर्नुस
हेलम्बुमा बाढीले क्षति भएका १७ घर बन्ने : इन्द्रेणी टिमले यति धेरै रकम संकल गरि बुझायो?
घरमा सधैँ लक्ष्मीको बास चाहानुहुन्छ ? राख्नुस् यस्ता मूर्ति र प्रतिमा : सविता माता
प्रधानन्यायाधीश राणाको खतरा हुने सङ्केत देखिएपछी, सुरक्षाकर्मी बढाइयो